Miaina miaraka amin'ny vanin-taolana rheumatoid: tantaran'ny vehivavy iray - Fiaraha-Monina | Desambra 2021
Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana Vaovao, Wellness Fiaraha-Monina Fialam-Boly Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Mpanao Gazety Orinasa, The Checkout Wellness Fanatanjahan-Tena Mavesatra Zava-Mahadomelina Vs. Namana Lalao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao News
Tena >> Fiaraha-Monina >> Miaina miaraka amin'ny toe-javatra izay heverin'ny olon-tsy fantatra fa ‘mbola kely loatra’ ianao ka tsy maintsy miaina
Miaina miaraka amin'ny toe-javatra izay heverin'ny olon-tsy fantatra fa ‘mbola kely loatra’ ianao ka tsy maintsy miaina
Raha vao nanomboka nahatsapa fanaintainana niaraka aho, henjana ny maraina ary havizanana dia mora ny nanamboatra azy io ho antitra, na dia vao 37 taona monja aza aho. Niezaka ny tsy hanindry mafy ny vatako aho, saingy vao mainka niharatsy ny soritr'aretina ary tsikaritro fa mihazakazo foana ny tazo ambany izay niahiahy ahy.
Nanapa-kevitra ny hihaona amin'ny dokoterako voalohany aho mba hiresahana ireo soritr'aretiko. Nanafatra fitsapana rà litania izy; ny iray tamin'izy ireo dia nampiseho fiheverana tsara momba ny rheumatoid. Rehefa avy nihaona tamin'ny rheumatologist aho dia voamarina tamin'ny fomba ofisialy fa voan'ny aretin'ny vanin-taolana (RA) aho. Avy hatrany dia nahatsapa ho tototry ny fanantenana hiaina miaraka amiko ahovanin-taolana rheumatoid—toe-javatra tsy fantatro firy momba ny — nandritra ny androm-piainako. Vanin-taolana? Tsy izany ve no mahazo ny be taona?
Inona no atao hoe vanin-taolana rheumatoid?
Rheumatoid arthritis dia aretina autoimmune izayny hery fiarovan'ny vatana dia mamely ny tonon-taolana. Izy io dia mety hiteraka fahasimbana sy fahasimbana iraisana izay tsy azo ovaina ary mety hisy fiatraikany amin'ny rafi-pitatitra na ny taovam-pisefoana.Na dia tsy fantatra aza ny tena anton'izany [ny aretina], dia heverina fa ny sasany mitarika olona mora tohina fototarazo dia miteraka fisehoan-javatra autoimmune izay mitarika fanaintainana sy fanimbana iraisana, hoy izy Adam Meier, MD , an'ny Intermountain Budge Clinic any Logan, Utah.
Tsy mifototra amin'ny taona izany
Rehefa miteny amin'ny olona aho fa miaina miaraka amin'ny aretin-tratra rheumatoid matetika ny valinteniko dia, Fa mbola tanora loatra ianao ka tsy mahazaka aretin-tratra!Izany koa no tsapako! Misy karazany maro anefa ny aretin-tratra. Rehefa mieritreritra ny vanin-taolana ny ankamaroan'ny olona dia tena mieritreritra osteoarthritis izy ireo, izaymipoitra rehefa mihena ny taolam-paty miaro ny faran'ny taolana rehefa mandeha ny fotoana. Araka ny voalazan'ny Dr. Meier,Ny osteoarthritis dia mahazatra kokoa [noho ny RA] ary tsy aretina autoimmune izay mitaky hery fiarovana mba hisorohana ny fahasimban'ny fiaraha-miasa.
RA matetika dia manomboka amin'ny vanim-potoana antenantenany, saingy mety hitranga amin'ny fotoana rehetra izany. Misy fiantraikany bebe kokoa noho ny tonon-taolana. Raha ny fanaintainan'ny mpiara-miombon'antoka matetika no famantarana voalohany sy miharihary indrindra amin'ny vanin-taolana rheumatoid, dia aretina mitera-doza izany, hoy ny Dr. Meier, izay nanamarika fa ny havizanana, ny fanaintainan'ny hozatra, ny tsy fahampian-dra, ny fahaverezan'ny taolana ary ny maso maina na ny vava maina (fantatra amin'ny hoeNy Sjögren's syndrome) dia mahazatra, ary ireo soritr'aretina tsy dia mahazatra loatra toy ny fahasarotana amin'ny havokavoka, vasculitis na atherosclerosis aza dia azo atao amin'ny RA.
Ahoana no hitsaboana RA
Tamin'ny lafiny maro, dia nahazo aina aho rehefa nahazo ny diagniko satria nanazava ny antony mahatonga ahy hahatsiaro mangirifiry sy kivy tanteraka. Faly aho fa afaka misafidyvanin-taolana rheumatoidfitsaboana. Nanana fitsapana Vectra Da aho(hetsika aretina multi-biomarkerfitsapana)sy ny ultrasound izay naneho fa eo am-piandohan'ny aretina aho. Noho izany, nanoro hevitra ny rheumatologist ahy fa handalo ny ririnina sy ny vanim-potoanan'ny gripa aho (satria manan-janaka kely aho) raha azo atao alohan'ny handehanana fanafody immunosuppressor.
Ny fanafody mahazatra ampiasaina amin'ny fitsaboana RA dia misy ny NSAID (ibuprofen, naproxen, aspirin, sns.) Ho an'ny fanaintainana sy ny kortikosteroid. Araka ny filazan'i Rory Smith, Pharm.D., Ao amin'ny Zava-mahadomelina sy fanomezana amin'ny Cedar any Cedar City, Utah, ireo fanafody ireo dia tokony hampiasaina amin'ny fotoana fohy sy kely.
Ny fari-pitsaboana dia ny fanafody manova aretina manohitra ny rheumatic (DMARD), hoy ny Dr. Smith.Misy karazany roa ny DMARD: fitsaboana mahazatra sy biolojika. Methotrexate ary ny DMARD am-bava mitovy amin'izany no fitsaboana mahazatra indrindra, hoy ny Dr. Smith, izay nanamarika fany biolojika dia mahazo laza bebe kokoa amin'ny fotoana rehetra. Ireo fanafody ireo dia tsy manala fanaintainana, fa miasamihena na miverina mihasimba aza ny simba. Dr. Smith dia nanamafy koa ny maha-zava-dehibe ny fitsaboana tsy fanafody ho an'ny mararin'ny RA toy ny fijanonana ho mazoto amin'ny fanatanjahan-tena malefaka.
Ireo mararin'ny RA dia ahiana hihombo amin'ny osteoporosis, aretina misy taolana malemy ka mety hiteraka vaky. Na dia mitranga matetika aza ny osteoporose amin'ny marary efa antitra, ny fanafody RA dia mampitombo ny mety ho voan'ny osteoporose.
Miaina miarakavanin-taolana rheumatoid (Mivoaka)
Nandritra ny volana vitsivitsy lasa izay, ny soritr'aretiko dia tsy nitsaha-nitombo tamin'ny fahasarotany ka dia nifanao fotoana tamin'ny dokotera nitantana steroid-based, Tsindrona Depo-Medrol mba hanampiana hampihena ny fivontosana ary koa nampidirina tsindrona Methotrexate. Haharitra herinandro maromaro vao hahalalana raha mandeha ny fanafody, saingy faly aho fa ny voka-dratsin'ny aretina (maloiloy sy havizanana) dia azo tanterahina hatreto. Raha hita fa tsy mandaitra ny Methotrexate dia nilaza ny dokoterako fa hifindra amin'ny biolojika isika.
Te-ho mahery setra amin'ny fitsaboana RA aho noho ny kalitaon'ny fiainana. Amin'ny maha mpanoratra ahy dia nanjary iraka nataoko ihany koa ny ho feo amin'ireo izay miatrika aretina mitaiza isan'andro (na firy taona ny olona) izay matetika tsy hitan'ny olon-drehetra.
Marika & Fitaovana atin'akanjo vanim-potoana 9 tsara indrindra: Torolàlana ho an'ny mpividy
Celexa vs Zoloft: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
Voamarina fa diabeta type 1 ny zanakao. Inona ny manaraka?
Ovulation 101: Mianara bebe kokoa momba ny tsingerina, ny calculatera ary ny fitondrana vohoka
Ny zava-mahadomelina malaza indrindra amin'ny SingleCare tamin'ny Jolay
Ahoana ny fomba hiresahana amin'ny ankizy ny aretinao
Afaka manampy amin'ny fihenan-danja ve ny vinaingitra paoma?
Fitsaboana PCOS mahomby 5
Ohatrinona ny vitamina D tokony ho raisiko?
Afaka manampy tiroida tsy miasa ve ny fiasana?
Mahatonga anao hitombo lanja ve ny fiterahana?
Fanafody fanafody tsy misy marika: Inona no tokony ho fantatrao
ohatrinona ny vidin'ny fitsaboana tsy fiterahana
azo antoka ve ny miaraka mitondra ny advil sy ny tylenol
syrup kohaka tsara indrindra ho an'ny olon-dehibe any Etazonia
inona ny mahasamihafa ny ativan sy ny valium
inona no azoko atao amin'ny holatra toenail
afaka aho, misotro toaka raha mandray Z entana
ny fanafody fisalasalana toy ny zofran
Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana
Zava-Mahadomelina Vs. Namana
Copyright © Zo Rehetra Voatokana | covidografia.pt